I-beta yesikhombisa manje isiyatholakala kubathuthukisi be-watchOS 8, i-tvOS, i-iOS ne-iPadOS 15 | Izindaba ze-IPhone
Esontweni eledlule i-Apple yethule ama-betas wesithupha lonjiniyela bezinhlelo zabo ezintsha zokusebenza. Yize bengafakanga izindaba ezinhle, bachaze ukuthi inguqulo yokugcina esizoyibona ekwindla izokuba njani nokuthi yiziphi izindaba ezizofika kunguqulo yakamuva. Emahoreni ambalwa edlule, U-Apple ukhiphe i-beta yesikhombisa yonjiniyela yazo zonke izinhlelo zakho ezintsha zokusebenza. Phakathi kwazo kukhona I-tvOS 15, i-watchOS 8, i-iOS 15, ne-iPadOS 15. Uma ungunjiniyela futhi unephrofayili efakwe kudivayisi yakho, manje usungabuyekeza futhi ujabulele izindaba kule beta entsha.
Isonto elisha, ama-betas amasha: i-beta yesikhombisa yonjiniyela manje isiyatholakala
I-Apple iyaqhubeka nohlelo lwayo lokuqalisa lwe-beta ngaphakathi kohlelo lwayo lonjiniyela. Sekuphele amasonto ambalwa, ukwethulwa kwenzeke maphakathi nesonto futhi ezinsukwini kamuva inguqulo efanayo yethulwa ngaphansi kwe-beta yomphakathi. Kodwa-ke, kubonakala sengathi ijubane lama-betas omphakathi liyashesha futhi I-Apple ifuna ukuhambisana nabathuthukisi nabasebenzisi ababhalise ku-beta yomphakathi.
Ungakushintsha kanjani ukuklama kabusha kwebha yokuzula ye-Safari ku-iOS 15
La i-beta yesikhombisa konjiniyela be-watchOS 8, i-tvOS, i-iOS ne-iPadOS 15 isiyatholakala Ukuvuselela i-iPad ne-iPhone kumane kufinyelele kuzilungiselelo zedivayisi futhi, nephrofayili yonjiniyela efakiwe, ibuyekeze ngaphandle kwentambo. Uma inguqulo entsha isifakiwe ku-iPhone, singaya kuhlelo lokusebenza lwe-Clock bese sifaka inguqulo entsha ye-watchOS 8. Ekugcineni, ukuvuselela i-Apple TV yethu kuzodingeka siyenze ngokulanda iphrofayli kusuka kuwebhusayithi esemthethweni ye-Apple bese siyifaka idlula ngeXcode.
Si ubhalisile kuhlelo lwe-Apple Public Betas unenhlanhla ngoba sekukhishwe uhlobo olusha lwezinhlelo zokusebenza. Ukuyibuyekeza, mane ufinyelele ku-'Software Updates 'kusuka kuhlelo lokusebenza lwe-Izisetho zedivayisi yakho. Emahoreni ambalwa alandelayo sizoshicilela ushintsho olukhulu oluvele kule beta yesikhombisa yonjiniyela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » iOS » iOS 15 » I-beta yesi-8 manje isiyatholakala kubathuthukisi be-watchOS 15, tvOS, iOS kanye ne-iPadOS XNUMX
I-Apple TV neMac akuhehi ukunakwa kwabasebenzisi be-iOS